Igumbi Elinemizuzu eyi-12 ukusuka eForesta Lumina - I-Airbnb
Igumbi Elinemizuzu eyi-12 ukusuka eForesta Lumina
Ngaba unqwenela ukuzola, ukuthi zava nokusondela kwindalo? Intliziyo yeGadi inikezela ngayo yonke loo nto!
Yonwabela ubukhulu bendlu yethu yaseLouisiana; zonke iintanda zayo zibonisa ubuhle bendalo. Igumbi elineenqwelo-moya libekwe kumgangatho osezantsi. Inebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela labucala. Kukho negumbi elikhulu elisetyenziswa ngumntu wonke. Ukubethwa ngumoya kuvumelekile!
Sikwimizuzu eyi-3 ukusuka kwidolophana yaseCompton kwaye yimizuzu eyi-12 xa usuka eForesta Lumina naseCoaticook 's Parc de la Gorge.
Intliziyo yeGadi yenza kube tofotofo, ukuzola nokusondela kwindalo. Yonwabela ubukhulu bendlu yethu yaseLouisiana. Ime phezu kweenduli; ukutyibilika kwayo okujikelezileyo kukuvumela ukuba wonwabele indawo entle.
Ubutofotofo kunye neembono. I-Wi-Fi ethembekileyo kunye neembono ezintle. Imizuzu eyi-12 ukusuka kwiCoaticook 's Parc de la Gorge kunye neForesta Lumina. Yintoni engakumbi esinokuyithetha?
Igumbi elineenqwelo-moya libekwe kumgangatho osezantsi. Inebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela labucala. Ibhedi inokutshintshwa: ingabekwa ngaseludongeni ukuze kubekho indawo ephakathi yeentlanganiso okanye nayiphi na into efuna indawo engabhatalelwayo. Eli gumbi linefriji encinci. Igumbi linendawo yokungena yabucala enesitshixo se-elektroniki kwibhalkhoni engaphandle, kunye nomnyango okhokelela kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke. Ukubona iNtshona (ukutshona kwelanga).
Indlu inendawo yokubambelela kumgangatho ngamnye. Unokuphumla uze wonwabele ukubuka iindawo ngoxa wonwabele ikofu yakho yasekuseni. Ukuba uyayinqwenela, awuzukuba nazo naziphi na iindaba okanye idatha nge-Wi-Fi yethu eqinileyo. Ukugcinwa kwendalo kunye nokukhathalela kubalulekile kuthi; nceda uqaphele ukuba zonke isepha zethu kunye nesepha zilungele indalo. Abasebenzi bethu nabo baqeqeshelwe ukwandisa iindlela zokukhusela indalo.
Asinikezeli ngokutya, kodwa sinikezela ngezi zinto zilandelayo: izixhobo, izitya, umatshini wokwenza ikofu (oqukiweyo), imbiza yokupheka, ioveni ye-microwave, i-convection mini-oven nefriji. Izitya okwaziyo ukuzitya; sicela nje ukuba uhlambe izitya ozisebenzisayo. Kukho iivenkile zokutyela ezintle eCompton ekufutshane. Ungoyiki ukubuza uYves ngeendaba zakutshanje. Uya kukucebisa ngeevenkile zokutyela ezininzi ezintle onokuzifumana kwidolophana ekufutshane yaseCompton. Usendlini okanye uyafumaneka efowunini.
Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu uyasebenza ngamaxesha ashushu, ngoko ukulala kamnandi ebusuku kuqinisekisiwe.
Kukho indawo eyaneleyo yokupaka kule ndlu.
Amalungu entsapho yeLGBTQ amkelekile.
Ukutya xa kucelwa.
Kukho i-helipad kule ndlu yeendwendwe ezikhethekileyo.
Inombolo yethu yeCITQ ngu-149413.
Yiza uze utyelele!
Kwindalo, ukutya okumnandi okanye ukuphumla, ufike kwindawo efanelekileyo!
Sikwimizuzu eyi-3 ukusuka kwidolophana yaseCompton kwaye yimizuzu eyi-15 ukusuka eForesta Lumina naseCoaticook 's Parc de la Gorge.
Zininzi izinto onokuzibona eDowntown Compton ehlotyeni. Kukho imarike yoluntu qho ngoLwesine ukususela ngo-4 emva kwemini ukuya ku-7 emva kwemini. Iivenkile zokutyela eziyi-4, ivenkile enye yokubhaka, ukutya kunye nevenkile ekwikona. Indawo yethu ikumgama wemizuzu eyi-15 ukusuka kwiCoaticook ’s parc de la Gorge kunye nezinto ezininzi ezibangel' umdla ezifana neForesta Lumina edumileyo. Kwimizuzu eyi-15 ukusuka eLennoxville, eNorth Hatley okanye eAyer 's Cliff. Imizuzu eyi-35 ukusuka eOrford National Park kunye nesixeko saseMagog. Ngapha koko, zonke iindawo ezinomtsalane zaseMpuma zifumaneka kuwe!
Umamkeli wakho, uYves, uhlala kwisakhiwo kwaye uhlala ekhona. Kwimeko yokungabikho kwexeshana, kuya kubakho inombolo yefowuni yokufikelela kuye. Ukufumana utshintsho kwindawo ohlala kuyo, iintsuku ezongezelelekileyo okanye nayiphi na inkxalabo yolawulo, nceda ufikelele kwiqela lenkxaso (uMarc okanye uDanielle) ngeprofayile yethu ka-Airbnb. Emva kwentsimbi ye-11pm okanye ngaphambi kwentsimbi yesi-7am kunokwenzeka ukuba kube nzima ukufikelela. Kwimeko yonxunguphalo olumandla (amapolisa, umlilo, i-ambulensi) fowunela kwa-911.
Umamkeli wakho, uYves, uhlala kwisakhiwo kwaye uhlala ekhona. Kwimeko yokungabikho kwexeshana, kuya kubakho inombolo yefowuni yokufikelela kuye. Ukufumana utshintsho kwindawo ohlal…